Kabary fanolorana ny Solom-Bodiondry - Informations et Actualités sur Madagascar
Culture Education Kabary fanolorana ny Solom-Bodiondry
by Alpha world on 23 h 33 in Culture, Education
Te hikorana izahay, te hitoto rebika nefa ao ilay fitenenana manao hoe: ny mihinan-kena tsy lasam-bidy hono mihinana amin’eritreritra, ny mitafy lamba tsy lasam-bola hono mitafy amin’ahiahy ary ny mitari-bady tsy lasam-bodiondry hono henatra amin’ny tany ama-monina.
Raha tamin’ny andro fahiny tokoa mantsy, dia nisy hatrany ireo fanomezana natolotra ho an’ny rafozana mba ho fanomezan-kaja amam-boninahitra azy ireo.
Tamin’ny andron-dRafohy sy Rangita ary Andriamanelo, dia ombalahy rangatandroka no atolotra.
Tamin’ny andron’Andriamasinavalona dia tanimbary no natolotra ho an’ny rafozana.
Tamin’ny andron’Andriambelomasina dia ondrilahy mivadik’ofaka no nentina ho an’ny rafozana.
Tsy lalàna raikitra anefa ireo rehetra ireo, fa ao ilay fitenenana manao hoe: “miova andriana miova sata”
Koa tamin’ny andron’Andrianampoinimerina dia nosoloina volamena ny vodiondry mba hitovizan’ny vahoaka rehetra, ka ny tovolahy tsy manam-bolamena no mitari-bady tsy lasam-bodiondry.
Nampiarahina amin’ny vakivakim-bola sy vato velona izany volamena izany ary fonosina voro-damba fito sosona, mba hanehoana ny faniriana.
Ho mafy tahaka ny vato ny fanambadiana, ary ho saro-bahana tahaka ny fatorana ny fitiavana.
Ankehitriny tompoko, dia manolotra ny solom-bodiondry izahay nahajam-bolana ho valim-pitia ireo loharano nisehoan’i Mirana.
Manaraka izany, tsy havakavahana tahaka ny ketsa na hosoritsoritina tahaka ny volo fa ampiarahanay ato ihany ireo sakelika marobe miaraka aminy ho an’ireo hazo tapakin’ny akalana, ho an’ireo kiady sy voninahitra rehetra, dia:
- Ny valim-babena
- Ny solon’ala volofotsy
- Ny solon’ny maka kitay
- Ny solon-tsakarano
- Ny hasim-boasarin-jaza niara-nihinana
- Ny saron-karon-drahavavy
- Ny zaram-pangadin-dehilahy
Koa atolotray am-panetre-tena lehibe tompoko; tsy sahaza anareo tolorana fa sahaza ny tana-manolotra.
Ny ranofotsy hono tsy azo ho vary, ny vato an-tanan-drahalahy tsy atora-borona, tantely tapa-bata izy ity, ka ny fo no mameno, fatra ny an’Andriamatoa mantsy, atao tahaka ny akoho manatody, izay tsy alatsany anio, alatsany indray raham-pitso, rahafak’ampitso koa, mbola andro ka tsy solom-bodiondry intsony no ateriny amin’izay fa ireo adidy amanan-draikitra manandrify azy.
Raiso am-pifaliana fa vokatry ny fitiavanay!
By Alpha world at 23 h 33